हरेक मंगलबारको दिन गणेश भगवानको पुजा गरेमा हुनेछ धनको वर्षा,पुजा गर्ने विधि पढ्नुहोस। - Mountain Media
हरेक मंगलबारको दिन गणेश भगवानको पुजा गरेमा हुनेछ धनको वर्षा,पुजा गर्ने विधि पढ्नुहोस।
हिन्दु धर्म अनुसार गणेश भगवानको महिमा अपरम्पार रहेको छ ।भगवान शिव र पार्वतीका पुत्र गणेशको पुजा आराधना विधिसम्मत गर्ने हो भने तँपाई हामा्रे जिवन पनी सुखी र खुसी हुन्छ । हरेक भगवानको पुजा आजा गर्दा गणेश भगवानको पुजा शुरुमा गनुपर्दछ भनिन्छ नि कुनै कार्यको शुरुवात गर्नुलाई नै श्रीगणेश गर्ने भन्नेबाट पनी यो कुरा पुष्टी हुन जान्छ ।
२. गणेश मन्दीरर्मै जानुहून्छ भने तिलको लड्डु तयार गर्नुहोस,
३. महिला भक्तजन भएमा आफ्नो सारी अर्थात सलले पुजा समयमा आफ्नो शिर छोप्नुहोला
५. फूल अक्षता साथै पातिहरु अगरबत्ती बालेर आराधना गरीसकेपछी चढाईदिएर पुजा गर्नुहोस,
७. तपाँईको मनमा गणेश भगवान भएको कल्पना गर्नुहोस,आखाँ बन्द गरेर गणेश भगवान आफुसंगै भएको महसुस गर्नुहोस,
८. गणेश भगवानसंग बोल्नुहोस ,केहि इच्छीत कुरा भए माग्नुहोस ,र तपाँई उहाको भक्त भएको भान गराउनुहोस,
धुर्मुस सुन्तली द्वारा ५० थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग